Enyemaka | Zeevou
Zeevou Mara bụ isi ihe maka isiokwu enyemaka niile, vidiyo ọzụzụ na Ajụjụ ga-enyere gị aka iji ọtụtụ atụmatụ anyị. Ma ị na-amalite ma chọọ ịgbaso usoro ntuziaka anyị site na nhazi ma ọ bụ onye ọrụ aka ochie chọrọ ịmatakwu banyere atụmatụ ọhụrụ, nke a bụ ebe ị ga-amalite ile anya.
Anyị nọ ebe a iji kwado gị usoro ọ bụla.
Nzọụkwụ nhazi usoro-nhazi na nkọwa zuru ezu banyere otu esi eji akụkụ dị iche iche nke usoro ahụ.
Gụọ azịza nye ajụjụ anyị a na-ajụkarị, ma ọ bụ jụọ ajụjụ nke gị.
Maka ndị mmụta a na-ahụ anya, anyị na-etinyekwa ọtụtụ vidiyo ọzụzụ.
Jikọọ na Movement
Bụrụ onye na-arụsi ọrụ ike nke ezinụlọ Zeevou site na isonye na mpaghara ụwa anyị n'ịntanetị. Nye ihe mmụta gị, netwọkụ, ma ọ bụ jụọ ndị ọbịa ibe gị maka nkwado.
Soro anyị WhatsApp Group
Nweta ozi sitere na otu anyị.
Kwuo Hi na Facebook
Nye nzaghachi na-aga n'ihu maka ọdịnihu nke Zeevou.
Akwụkwọ ndị kachasị ewu ewu
Jikọọ na Airbnb
Jikọọ na Channel site na njikọ iCal
Ezigbo ụlọ Mobile App
Atụmatụ Nighting / Weekly / Monthly na ọnụego
Tinye Zeevou iFrame n’ime HTML websaịtị gị
Kwesịrị Nkwado Ndị Ọzọ?
Nweta Ihe Raara Onwe Ya
Onye Mmekọ Ihe Successga nke Ọma Onye Mmekọ
Ọ bụrụ na ị bụ Onye Nlekọta, a ga-ekenye gị Onye njikwa ihe ịga nke ọma Onye Mmekọ mgbe ị debanyere aha. Onye Mmekọ Onye Mmekọ ga-anọ mgbe niile site na email ma ọ bụ karịa WhatsApp, yabụ nweere onwe gị iru ha.
Maka ndị nlekọta na ndị nkwusa ozioma, ndị na - enyere aka Aka na Ndị Nlekọta aka dị n’elekere na Live Chat. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta azịza nye ajụjụ gị site na iji ihe onwunwe anyị dị n'elu, nweere onwe gị ịhapụ anyị akara.